५२६ वटा दाँत भएको बालक भेटियो, डाक्टरहरु बने हैरान ! « Salleri Khabar
५२६ वटा दाँत भएको बालक भेटियो, डाक्टरहरु बने हैरान !
एजेन्सी । सात वर्षीय बालक आफ्नो तल्लो बङ्गाराले लगातार दु:ख दिएपछि हस्पिटल पुगे । आफूलाई खानेकुरा चपाउन साथै मुख चलाउनसमेत समस्या भएको उनले बताए । बालकको पिडा चाख दिएर सुनिरहेका डाक्उटरहरुले उनलाई मुख खोल्न अर्ह्याए । बालकको मुख खोलेपछि डाक्टरहरुले थाहा पाए बालकको बङ्गारा आसपासको भाग सुन्निएको रहेछ। डाक्टरहरुले बालकको मुख स्क्यान गरेर हेरे । त्यसपछि डाक्टरहरुको होसहवास उड्यो । उनीहरुले एकअर्कालाई हेराहेर गरेर लामो समय बिताए । हो- बालकको तल्लो बङ्गारामा खादीएर रहेको ५२६ वटा दाँत देख्नासाथ डाक्टरहरु हैरान हुन् पुगे ।
अविश्वसनीय जस्तै लाग्ने उक्त घटना छिमेकी मुलुक भारतको चेन्नाईमा घटेको हो । चेन्नई स्थित् सभिथा डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलकी प्रमुख डा. प्रतिभा रमानीका अनुसार उक्त बालकलाई लाखौँ व्यक्तिमध्य एकमा हुने कम्पाउण्ड कम्पोजिट ओडान्टोमा भन्ने रोग लागेको हो । डा. रमानीका अनुसार उक्त रोग वंशानुगत पनि हुन् सक्ने साथै वातावरणमा रहेका हानिकारक विकिरणको कारणले पनि हुन सक्ने छ ।
डा. रमानीले बताइन, ” त्यहाँ ०.१ मिलिमिटर(०.०० ४इन्च) देखि १५ मिलिमिटर(०.६ इन्च)सम्मका ५२६ वटा दाँतहरु थिए । सबैभन्दा साना, मसिना र टुक्रिएका दाँतहरुमा पनि इनामेल कोट भेटिएको थियो । जसले गर्दा हामी चकित पर्यौं ।”
सभिथा डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलको अनुसार तीन दिनको अप्रेशन पश्चात उक्त बालक सकुशल आफ्ना २१ वटा स्वस्थ दाँत सहित घर फर्किएका छन् ।